Maxaa looga hadlay kulankii dhex maray RW Rooble iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh..? - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta gurigiisa ugu tegay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mida madaxda mucaaradka ee Midowga Musharixiinta.
Kulanka ayaa la sheegay inuu isugu jiray Salaan iyo wadahadal ku saabsan xaaladda dalka sida Amniga iyo Doorashooyinka oo ay labada masuul isla soo qaadeen.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Fidriga.Ra’iisul Wasaaraha iyo madaxweynihii hore ayaa sidoo kale ka wada hadlay amniga guud , xasilloonida caasimadda iyo Arrimaha Doorashooyinka Dalka” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska Ra’iisal wasaaraha.
Dhinaca kale Madaxweynihii hore xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu uga hadlay kulankan ku yiri: “Waxaan maanta hoygeyga ku soo dhoweeyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo aan wadaagnay farxadda munaasabadda Ciidul Fidriga. Sidoo kale waxaan ku bogaadiyey dadaaladiisa dardargelinta xal-u-helidda arrimaha doorashooyinka & maareynta arrimaha amniga ee xilliga kala guurka”
Rooble ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, markii uu socdaal cumro ah u tegay dalka Sacuudiga, wuxuuna kulankan kusoo beegmay, iyadoo la fuliyey qodobkii ugu muhiimsanaa ee in caasimadda laga saaro ciidamadii taageersanaa Mucaaradka ee ka hor yimid muddo kororsiga.
Previous articleCiidamada Yuhuudda oo kordhiyey Duqeynta culus ee Marinka Gaza (Geerida oo ku dhow 100 -Sawirro-)
Next articleXamza Nassar: 12 Sano jir shahiiday isagoo sooman oo tusaale u noqday Xasuuqa Yuhuudda ka wado Gaza